पाँचसय ५० प्रदेश सांसदले सपथ लिए, २ नम्बर प्रदेशको सपथमा भाषा विवाद
काठमाडाै, ७ माघ । प्रदेशसभाका ५ सय ५० सांसदहरुले सपथ लिएका छन् । सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखबाट ७ वटै प्रदेशका ज्येष्ठ सदस्यहरुले सपथ लिएपछि ज्येष्ठ सदस्यहरुबाट...
आइतवार, माघ ७, २०७४ 80
दाङको बन्द खुल्यो, अन्य आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत
दाङ, ७ माघ । पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी रुपन्देही तोकिएको बिरोधमा दाङमा हुँदै आएको बन्द खुलेको छ । शनिवार बेलुका बसेको विभिन्न राजनीतिक दल सम्मिलित संघर्ष समितिको बैठक...
आइतवार, माघ ७, २०७४ 0
सुशील बस्नेत । दाङ,६ माघ । संयुक्त संघर्ष समिति दाङको आह्वानमा जारी आन्दोलका कारण दाङको जनजीवन झनै नराम्रोसंग प्रभावित भएको छ । जिल्लाका बजार क्षेत्र, शिक्षण, संस्था कल...
शनिबार, माघ ६, २०७४ 95
शनिबार, माघ ६, २०७४ 53
रामहरि न्यौपाने नुवाकोट, ६ माघ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले विभिन्न स्थानबाट बरामद गरेको ठूलो परिणामको अबैध घरेलु मदिरा नष्ट गरेको छ । मदिरको घरेलु अबैध उत्पादन र कारोबार नियन्त्रणको ‘बिशेष अभ...
शनिबार, माघ ६, २०७४ 38
रौतहट, ५ माघ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै १४ पटक अनशन बसेका डा. गोविन्द केसी मधेसका शीतलहर प्रभावित बिरामीको उपचारका लागि रौतहट आइपुगेका छन् । चिकित्सकसहितको...
शुक्रबार, माघ ५, २०७४ 64
अमृतराज काफ्ले । काठमाडाै, ४ माघ । राष्ट्रियसभा चुनावमा कस्ता उम्मेदवार बनाउने भन्ने एजेण्डासहित बसेको काँग्रेस केन्द्रिय समिति बैठकमा नेताहरु...
बिहिबार, माघ ४, २०७४ 100
काठमाडौ, ४ माघ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशको अस्थायी राजधानीको विषयलाई लिएर आन्दोलन नगर्न आह्वान गर्नु भएको छ ।
बिहिबार, माघ ४, २०७४ 93
दाङ, ४ माघ । सरकारले प्रदेश ५ को अस्थायी मुकाम बुटवल घोषणा गरेपछि दाङमा आन्दोलन चर्किएको छ । मंगलबारबाट थालिएको आन्दोलनले विहीबारसम्म आइपुग्दा विशाल रुप लिएको छ । बुधबा...
बिहिबार, माघ ४, २०७४ 46
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त...
बुधबार, माघ ३, २०७४ 88
काठमाडाै, ३ माघ । प्रदेशहरुको अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा सहमति नभएपछि मन्त्रिपरिषद बैठक दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
बुधबार, माघ ३, २०७४ 126
दाङ, ३ माघ । प्रादेशिक राजधानीको माग राख्दै विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन चर्काइएको छ । प्रदेश नं. १ को राजधानी धनकुटा हुनुपर्ने माग राख्दै धनकुटावासीले लामो समयदेखि आन्दोलन...
बुधबार, माघ ३, २०७४ 71